Nagu saabsan - Szlightall Optoelectronics Co., Ltd.
Soo bandhigida kirada
Gudaha lagu soo bandhigay bandhig
Bandhigga darbiga fiidiyowga ee gudaha ayaa hogaaminaya
SZLIGHTALL Optoelectronics Co., LTD. waxaa la aas aasay sanadkii 2013. xaruntiisa waxay ku taalaa Shenzhen. Sida la og yahay, Shenzhen waa saldhig weyn oo warshadeed hoggaamineed, halkan waxaa ku yaal silsilad dhammaystiran oo SUPPLY ah oo muujinaysa LED-yada. Waxaan nahay shirkad heer-sare ah oo tiknoolajiyad ah oo diiradda saareysa R&D, wax soo saar, tafaariiq iyo u adeegidda muujinta LED-ka. Waxaan ku leenahay xarun hawlgal oo noo gaar ah iyo xarun wax soo saar oo ku taal Shenzhen, horeyba waxaa loogu dhoofiyey in ka badan 100 waddan oo adduunka ah, oo leh mashaariic badan oo kala duwan oo lagu guuleystay.
Sanado badan oo horumar ah kadib, waxaan soo aruuriney khibrad qani ah R & D oo waxaan leenahay qalab wax soo saar iswada oo heer-koowaad ah, warshad soosaarida otomatiga nadiifka ah iyo qalabka nidaamka ka-hortagga. Waxay aasaastay hanaan nidaamsan, wax soo saar xirfadle ah oo soo bandhigid ah, kaas oo bixiya dammaanad wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo tayada xasiloonida iyo qiimaha wax soo saarka ee waxtarka leh.
Badeecaduhu waxay leeyihiin kala duwanaansho buuxa iyo qaabdhismeed kala duwan, alaabtoodu waxay daboolaysaa muuqaalka midabbada oo buuxa ee gudaha iyo dibedda, soo bandhigida xayeysiinta LED-ka, bandhigga heerka LED-ka, muuqaalka qaab aan qaab-dhismeedka lahayn ee LED, bandhigga mobilka gawaarida, bandhigga isboortiga LED, muujinta macluumaadka taraafikada LED, kaas oo waxaa lagu xukumay suuqa gudaha iyo dibedda ee warshadan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa in ka badan 5000 kiis oo guuleystay oo ka socda adduunka oo idil. Waxaan ku guuleysaneynaa kalsoonida noocyada caalamiga ah waxaanan ka dhex muuqannaa tartamo badan oo caalami ah iyo waxqabadyo caalami ah, iyadoo soo jiidaneysa kumanaan macaamiil ah. Waxaan ku dhagannahay aaminaaddeena hawlgal: "wax soo saar tayo sare leh, tikniyoolajiyad heer sare ah, adeeg tayo sare leh". Waxaan ku dheganahay macaamiisha-udub-dhexaad ah waxaanan sii wadnaa abuurista iyadoo ku saleysan baahida macaamiisha, guuleysiga ixtiraamka iyo kalsoonida Badeecadeenu waxay hoggaanka u qabatay u hoggaansanaanta shahaadda 3C, UL, TUV, EMC, CE, RoHS iyo heerka ISO9001 ee warshadaha.
Shirkadeenu waxay leedahay suuq-geyn aad u wanaagsan, tikniyoolajiyad iyo koox maamul, waxay hodan ku yihiin khibrada duulimaadkan, si aan diirada u saarno badeecada R & D, aan u helno alaabooyin cusub una horumarino tikniyoolajiyad joogto ah. Kooxdu waa 24 saacadood oo adeeg ah oo khadka tooska ah ah, diyaar u ahaato xallinta dhibaato kasta oo macaamiisha ah. Sababtoo ah badeecad tayo sare leh oo leh qiimo tartan, xalal xirfadeed iyo adeeg wanaagsan kadib iibinta, Shirkadda Lightall waxay amaan sare ka heshaa macaamiisha adduunka oo idil. Si kastaba ha noqotee, ma joojin lahayn; waanu sii wadi doonaa keenida alaabooyin iyo adeegyo aad ufiican macaamiishayada. Bartilmaameedkayagu wuxuu ilaalinayaa iskaashiga muddada fog ee macaamiisha.
Qaloocsan Display keentay
Muuqaalka darbiga fiidiyowga ee gudaha ah
Kireynta Display keentay
Bannaanka keentay Display